Yakanakisa simbi isina tsvina undercut anchor yematombo machena girenayiti kugadzirisa system Mugadziri uye Fekitori | Kuchenjera
Iyo anchor bhaudhi inogona kushandiswa kune yakasikwa yakaoma dombo mm15mm, nyoro dombo ≥20mm; inokodzera rimwe gobvu rinoumbwa bhodhi, samende fiber mabhodhi, ukobvu ≥16mm, iyo inouya yemabhodhi uye kupinduka kwemativi emapuranga.
• Kurumidza uye nyore Kuisirwa
• Yakakura michina inotakura kugona
• Kwakanaka kudengenyeka kwenyika
• Wide hwakawanda hweplate anchor mapoinzi
• Hazviparadze kuitika kwepamusoro
Anti-yakasununguka patent dhizaini, chengetedzo chinhu 100%
Iyo yakasarudzika anti-yakasununguka dhizaini inogona kutamba basa rekudzivirira kudzoka uye kupokana-kusununguka uye kugadzirisa kuchengetedzeka. Panguva imwecheteyo, iko kukomba kwekudzika kwekukanganisa bhaudhi rekumashure kwakadzikira, uye nhanho yekusimudzira inovandudzwa.
Bemhapemha design, zvinobudirira kuwedzera upenyu basa
Titanium-yakafukidzwa A4 simbi isina simbi kumashure mabhaudhi anonyanya kurwisa kuora uye anogona kuiswa kune akasiyana mamiriro akaomarara uye akaomarara, kuwedzera hupenyu hwebasa hwezvisungo uye kuona kuchengetedzwa kwenguva refu kwemadziro emaketeni.
Kuisirwa magetsi, zviri nyore uye zvinobudirira, zvine hushamwari kune ndiro
Yakasiyana neyekuisa manyorerwo, kumisikidzwa kwemagetsi kune zvishoma zvinokanganisa pane iyo pani, yakaderera kukuvara chiyero, inogona zvirinani kudzivirira iyo pani, uye inogona kuiswa kune yakaoma kurembera kumisikidzwa kwemaketeni madziro pasi pemhando dzakasiyana dzemamiriro akakosha. Yese-yemagetsi kuisirwa ine yakanyanya kushanda, iri nyore uye inoshanda kuvaka
Yakangwara undercut anchor bolts
Kutsigira zvigadzirwa: aluminium alloy pendant
Iyo pendendi inogadzirwa nealuminium alloy uye iyo yepamusoro yakasanganiswa. Parizvino, pane H-akaumbwa, akagadzirwa nenzeve, uye C-akaumbwa pendende, kuitira kuti chinongedzo chakanamatira zvakananga paseri bhaudhi, uye kumisikidzwa nekusimbisa chinongedzo kunogona kupedzwa panguva imwechete. Panguva imwecheteyo, chinhambwe pakati pechikamu chinobatanidza uye chikuru keel chinogona kugadziriswa, icho chinogona kuwedzera kumhanya kwekuvaka uye nekuona iyo modular yekumisikidza, iri nyore kwazvo kutsiva nekugadzirisa.
Inoumbwa nealuminium alloy muviri, maviri nylon mitsetse (mabara erabha), uye maviri ekugadzirisa screws. Inowanzo shandiswa pakarembera yakaoma yedombo rakatetepa uye maceramic mahwendefa.
Iyo inoumbwa nealuminium alloy main body, matatu nylon mitsetse (mabara erabha) uye kugadzirisa masikuru, akakodzera kuomarara akaomeswa eakasiyana ukobvu dombo uye zvedongo ndiro.
Yakagadzirwa miviri miviri yealuminium alloy uye inogadzirisa masikuru, inokodzera yakaturikwa yakaoma yedombo uye zvedongo mahwendefa eakasiyana makobvu.
Pashure: Yakangwara-Chechitatu Chizvarwa Undercut Anchor
Zvadaro: Anchor Channel
simbi undercut chinotsigisa